दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जेल जाने भएपछी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथी षड्यन्त्र ! • raradiodarpan.com
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जेल जाने भएपछी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथी षड्यन्त्र !
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जेल जाने भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि षडयन्त्र भएको खुलासा भएको छ ।
नेपालका लागी नेपाली पार्टीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजिनामा दिन नहुने पक्षमा न्यौपाने उभिएका छन् ।
ओटीभी नेपाल डट कम सँगको विशेष कुराकानीमा अध्यक्ष न्यौपानेले प्रधानन्यायाधिश राणालाई कुनै पनि हालतमा राजिनामा नदिन र आफ्नो अडानमा कायम बस्न ढाडस दिएका छन् ।
राणाले खुट्टा कमाएर राजिनामा दिने होइन बरु साहस गरेर देउवा प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको पोल खोल्नु पर्ने भन्दै न्यौपानेले राणालाई सत्तारुढ दललेनै युज एण्ड थ्रो गर्न खोजेको पनि बताए । काम सकिए पछि फाल्न खोजिएको पनि उनले बताए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ताजा जनादेशमा जान्छु भन्दा अदालतको शक्ति प्रयोग गरेर परमादेश बाट प्रधानमन्त्री बनाइनुको परिणाम अहिले देखीएका भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले यो त सुरुवात मात्रै भएको र परमादेशको कमाल आगामी दिनमा अझै धेरै देख्न बाँकीनै रहेको बताए ।
चोलेन्द्रलाई राजिनामा गराएर आफु अनुकुलको भनेको मान्छे प्रधानन्यायाधिश बनाउँन खोजिएको भन्दै न्यौपानेले चोलेन्द्रको राजिनमाले मात्रै न्यायपालिका भित्रको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरे । एक पटक सबै छताछुल्ल पार्नु पर्ने उनले बताए ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बावुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई बचाउँनका लागी पनि अहिले यस्तो खेल रचिएको पनि न्यौपानेले बताए । चालेन्द्रको राजिनामा मागिनुका विभिन्न कारणहरु मध्ये कार्तिक १५ गते हुन लागेको बालुवाटर जग्गा प्रकरणको फेसला पनि मुख्य कारण भएको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेलेनै बावुरम भट्टराई र माधव नेपाललाई पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान हुन पर्छ मन्त्रीपरिषदका निर्णय नितिगत निर्णय भनेर उम्कन पाइदैन भनेर मुद्धा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्धाको फैसला कार्तिक १५ गते हुँदैछ ।
त्यस दिन मुद्धाको फैसाल हुन नदिनका लागी र यस्तो षड्यन्त्र भएको पनि न्यौपानलेले को आरोप छ । प्रचण्ड मध्यरातमा गएर प्रधानन्यायाधिशलाई यहि मुद्धा मिलाउँनको लागी भेटको पनि उनले आशंका गरे । बालुवाटर मुद्धामा अहिले माधव र बावुराम माथी अनुसन्धान भए भोली प्रचण्ड र देउवा पनि तानिने न्यौपानेले बताए ।